Windows အတွက် အသုံးဝင် Keyboard Shortcut Key များ - Myanmar End User
Windows အတွက် အသုံးဝင် Keyboard Shortcut Key များ
By Myanmar End User March 23, 2017 3135 views
Computer တွေမှာ Keyboard Shortcut လေးတွေ သုံးတာဟာ Mouse ကို click လုပ်ပြီး သုံးတာထက် ပိုမိုလျှင်မြန်ပါတယ်။ Shortcut key လေးတွေက များတယ်ထင်ရပေမယ့် သုံးပါများလာရင် အကူးတက မှတ်ထားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ Copy ကူးတာဆိုရင် Ctrl + C ဆိုပြီး အလိုလို သိနေပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကွန်ပျူတာသုံးရတာ ပိုမိုလျှင်မြန်စေဖို့ အသုံးဝင်တဲ့ Shortcut key တော်တော်များများကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Windows Key နဲ့ တွဲသုံးရတဲ့ Shortcut များ
Start + M – ဖွင့်ထားတဲ့ windows တွေက ချုံ့ပြီး tast bar ပေါ်မှာ နေရာ ချပေး ပါလိမ့်မယ်။
Start + Shift + M – task bar ပေါ်မှာချုံ့ပြီး ခဏ နေရာ ချထားတဲ့ windows တွေကို size ကြီး ပြန်ချဲ့ပေးပါတယ်။
Start + E – Windows ရဲ့ အင်ဂျင် စက်ခန်းလို့ ခေါ်ဆို နိုင်တဲ့ windows explorer ကို ဖွင့်ပေး ပါတယ်။
Start + R – Start menu မှာရှိတဲ့ ‘Run’ box ကို ဖွင့် ပေးပါတယ်။
Start + F – windows search dialog box ကို ဖွင့် ပေးပါတယ်။
Start + Ctrl + F – search box ကိုဖွင့် ပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ computer ဟာ network ချိတ်ဆက် ထားရင် computer dialog box ကို ဖွင့်ပေး ပါတယ်။
Start + Pause ( Break ) – Systerm properties dialog box ကို ဖွင့်ပေး ပါတယ်။
F1 – အကူအညီ တစ်စုံ တစ်ရာ လိုအပ်ရန် နှိပ်ပါ။
Ctrl + Esc – Start Menu ကို ဖွင့်ပေး ပါတယ်။
Alt + Tab – ဖွင့်ထားတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အကြားကို ကူးပြောင်း အလုပ်လုပ် စေနိုင် ပါတယ်။
Alt + F4 – ဖွင့် ထားတဲ့ ပရိုဂရမ် ကနေ ထွက်ခွာ စေပါတယ်။ (အလုပ် လုပ်လျက် သား ဖြစ် နေရင် သာမန် ပုံစံအတိုင်း save လုပ်
မလားလို့ မေးပါ လိမ့်မယ်။)
Shift + Del – select ပေးပြီး ရွေးချယ် ထားတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုကို အပြီးတိုင် ဖျက်ဆီး ပစ်ပါလိမ့်မယ်။
Ctrl + C – မိတ္တူ ပွားပေး ပါမယ်။
Ctrl + X – တစ်နေရာမှ တစ်နေရာကို ကူးပြောင်း နေရာ ရွှေ့ဖို့ အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ပါ။
Ctrl + past – မိတ္တူပွားပြီးသား ဖိုင်တစ်ခုကို ပြန်လည် နေရာ ချထားပေးပါတယ်။
Ctrl + Z – undo. လုပ်ဆောင် ခဲ့သော အလုပ်ကို မနှစ် သက်တဲ့ အခါမှာ မူလ အခြေအနေ အတိုင်း ပြန်ရောက် ရှိစေပါတယ်။
Ctrl +B – document အတွင်းမှာရှိတဲ့ tast တွေကို ပိုမို ထင်ရှားအောင် ပြုလုပ် ပေးပါတယ်။
Ctrl + U – document အတွင်းမှာရှိတဲ့ tast အောက်ခြေမှာ မျဉ်းသား လိုတဲ့အခါ သုံးကြပါတယ်။
Ctrl + I – Italic- text တွေကို စောင်းပေးပါတယ်။
Mouse/ Keyboard Modifier
Shift + right click (တစ်ချက်) – Rice click နဲ့တူတယ်။
active windows ရဲ့ display menu ကို ဖွင့်ပေးတယ်။
Shift + Left Click ( နှစ်ချက်)
Alt + Left Click ( နှစ်ချက်) – ဖိုင်သို့မဟုတ် folder ရဲ့ properties ကိုပြပေးမယ်။
F 10 – menu bar မှာရှိတဲ့ options တွေကို အဆင်သင့် ဖြစ်နေအောင် လုပ်ဆောင် ပေးပါတယ်။
Ctrl + Esc – Start Menu ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။
Shift + F 10 – ရွေးချယ်ထားတဲ့ဖိုင် တစ်ခုအတွက် ’short-cut’ ဖိုင်ငယ်လေး တစ်ခု ပြုလုပ် ပေးထား ပါတယ်။
Alt + down arrow – drop-down list box ကျလာစေပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု အတွင်းမှာပဲဖြစ်စေ၊ တစ်ခြား တစ်နေရာ တစ်ခု မှာပဲဖြစ်စေ features တိုင်း လုပ်ဆောင် နိုင်စွမ်း box ငယ်ကလေးများ ကိုယ်စီ ရှိကြသည်။
Alt + Tab – ဖွင့်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းအား တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အကြား ကူးပြောင်း စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ Alt Key ကိုဖိထားပြီး Tab Key ကို လွတ်လိုက်မယ် ဆိုရင် လုပ်ဆောင်ဆဲ လုပ်ငန်းစဉ် မှန်သမျှကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရှု နိုင်ပြီး လုပ်ငန်း ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။
Shift + ? – တကယ်လို့ shift key ကိုဖိနှိပ်ထားပြီး CD-ROM ဒါမှမဟုတ် DVD တစ်ချက်ကို ထည့်သွင်း လိုက်မယ် ဆိုရင် အဲဒီ CD/DVD ရဲ့ ‘Auto Run’ box တက်လာ ပါမယ်။ CD မှာ virus ပါဝင် လာမှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေး လိုတဲ့အခါမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။
Alt + Space – Restore, move, size, minimize, maximize စတဲ့ command တွေပါ ဝင်တဲ့ system restore box ကိုပြ ပေးတယ်။
Alt + hypen – Multiple Document Interface ကို ပြသ ပေးတယ်။
Alt + underlined letter – ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုအတွင်းမှာ သတိထားကြည့်မိရင် options bar ရဲ့ feature တွေမှာ မျဉ်းသား ထားတဲ့ စာသား လေးတွေ မျိုးစုံ တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။ Alt ကို ဖိနှိပ် ထားပြီး အခုန စာသား လေးကို နှိပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ အဲဒီ ‘feature’ ရဲ့ ’drop down box’ ( = ပါဝင်တဲ့ လုပ်ဆောင် ချက်တွေ ) ပွင့်လာ ပါမယ်။
Ctrl + F4 – address bar ကိုဖွင့်ပေးတယ်။
Alt + F6 – Alt + Tab အလုပ်လုပ်ပုံ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Selected objects & shell objects
F2 – ရွေးချယ်ထားတဲ့အရာဝတ္တုကို နာမည်အသစ် ပြန်ပေးဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေ စေပါမယ်။
F3 – ဖိုင်တွေအကုန်လုံးကို ရှာမေးမယ်။
Alt + Enter – ရွေးချယ်ထားတဲ့ အရာဝတ္တုရဲ့ properties’ ကို ဖော်ပြ ပေးပါတယ်။
ဖိုင်တစ်ခုမိတ္တူပွားရန် – Ctrl Key ကိုနှိပ်ထားပြီး အဲဒီဖိုင်ကို မတူညီတဲ့ တခြား နေရာကို ရွှေ့ပေးပါတယ်။ အပေါင်း လက္ခဏာ ပေါ်လာပြီး မိတ္တူပွား ပေးပါလိမ့်မယ်။
Shortcut တစ်ခုဖန်တီးရန် – Ctrl နဲ့ Shift Key တွေကို ဖိနှိပ်ထားရင် ဖန်တီးချင်တဲ့ folder ဒါမှမဟုတ် အရာဝတ္တုကို ဖန်တီးလိုတဲ့ နေရာဆီကိုdrag ဆွဲယူပါ။
F4 – object ကို select ပေးထားရင်းနဲ့ F4 ကို နှိပ်ရင် address bar ကို ဖွင့်ပေးပါတယ်။
F5(Refresh) – လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အလုပ်တွေကို ပြန်လည်
F6 – Windows Explorer အတွင်းဟိုဘက် ဒီဘက် cursor
Ctrl + A – အရာဝတ္တုများအားလုံးကို select လုပ်ပေးပါမယ်။ တကယ်လို့ desktop ပေါ်မှာ item တစ်ခု ကို click နှိပ်ပြီး ‘Ctrl + A’ command သုံးလိုက်ရင် ကျန်တဲ့ item တွေကိုပါ ရွေးချယ်ပြီးသား ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။
Shift + Click + close button – ဖွင့်ထားတဲ့ folder တွေမှန်သမျှ parent folder ကိုရော root folder တွေရော ပိတ်ပေးသည်။
Windows explorer အတွင်း *(keypad) – ရှိရှိသမျှ root folder တွေအကုန်ဖွင့်ပေးတယ်။
+(keypad) – root folder တခုအတွင်းရှိ ရှိရှိသမျှ file တွေဖွင့်ပေးတယ်။
-(keypad) – root folder တခုအတွင်းရှိ ရှိရှိသမျှ file တွေပိတ်ပေးတယ်။
Right Arrow – ‘+’ နဲ့အလုပ်လုပ်ပုံချင်းတူတယ်။
Left Arrow – ‘-’ နဲ့အလုပ်လုပ်ပုံချင်းတူတယ်။
Ctrl + Tab သို့မဟုတ် Ctrl + Tab + Shift – Mouse မသုံးဘဲ Keyboard နဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှားသွား နိုင် တယ်။ (Mouse အသုံးမပြုလိုပါက mouse properties တချို့ကို disable လုပ်ထားလျှင် ပိုကောင်း၏။)
Shift ကိုငါးကြိမ်နှိပ်တဲ့အခါ – Control panel ထဲမှာရှိတဲ့ Accessibility options ကို select ပေးပါ။ Shift ကို PC ထဲကနေ ‘ကွိ’ ဆိုတဲ့ အသံကလေး ပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ Shift Key ကို save မလုပ် ချင်ရင် cancel လုပ်ပါ။
ညာဘက် Shift ကို ရှစ်စက္ကန့်အကြာ ဖိထားတဲ့အခါမှာ – ညာဘက် Shift ကို ရှစ်စက္ကန့် ကြာအောင် ကိုင်နှိပ် ထားရင် filter key boxေ လး ပေါ်လာ ပါလိမ့်မယ်။
‘Number Lock’ Key ကို ငါးစက္ကန့်ကြာ အောင်ဖိထားတဲ့အခါမှာ – Number lock Key ကိုငါးစက္ကန့် ကြာ အောင် ဖိထားတဲ့အခါမှာလည်း ထိုနည်း လည်းကောင်းပါပဲ၊ အလုပ် လုပ်ပုံ ချင်းသာ ကွဲပြား သွားမှာပါ။
ဘယ်ဘက် Alt + ဘယ်ဘက် Shift =+ Number Lock – PC ထဲက’ကွိ’ အသံလေးအတွက် function ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်ကတော့ mouse key တွေကို အပိတ်အဖွင့် လုပ်စေချင်တာပါ။
ဘယ်ဘက် Alt + ဘယ်ဘက် Shift + print screen preview – မြင့်မားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရယူလိုတဲ့ အခါမှာ အဆိုပါ keyboard
တွဲတွေကို တွဲဘက် နှိပ်ပေး ရပါလိမ့်မယ်။
Start (Windows logo) + D – Window တွေကို task bar ပေါ်ကိုခဏ တင်ပေးတယ်။
Ctrl + Start + F – Search box ကိုဖွင့်ပေးပါမယ်။ ခွေးလေးကို မလိုချင်ရင် ပယ်ဖျက် ထားလို့ရပါတယ်။
Ctrl + Start + Tab – address bar ဆီကို ချက်ချင်း cursor ချပေးတယ်။
Start + Tab – Taskbar ပေါ်မှာစုပြုံ ပြီး ဖွင့်ထားတဲ့ folder တွေဆီကို တခုကနေ တခု ကူးပြောင်းနိုင်တယ်။
Start + Pause (Break) – System properties ကိုချက်ချင်း ဖွင့်ပေးတယ်။
Application Key – File သိုမဟုတ် folder ရဲ့ properties ကိုဖွင့်ပေးတယ်။
Dialog box command
Tab – dialog box ထဲမှာဆိုရင် နောက်တခုကို သွားဘို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေတယ်။
Shift + Tab – လာခဲ့တဲ့ control ဆီကို ပြန်သွားပေးတယ်။
Space-bar – ရွေးချယ်ပြီးလုပ်မယ်။ ( ဥပမာ button တခုကို ရွေးထားတယ်။ အဲဒီ button ကို click နှိပ်ရုံပါပဲ။ ဥပမာ check box တခုကို ရွေးမယ်ဆိုရင် space bar တချက်ပုတ်ရုံပဲ။ ဥပမာ နှစ်ခု ပြပေး ထားတယ်။ တခုကို ရွေးမယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Enter နဲ့တူတယ်။
Esc – အရာအားလုံးရဲ့ ၉၀ရာခိုင်နှူန်းဟာ ‘cancel’ ရဲ့ အလုပ် လုပ်ပုံနဲ့ တူတယ်။
Alt + Underline Letter – Alt ကို ဖိထားပြီး underline သားထားတဲ့အက္ခရာကို နှိပ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ command အတွက် short-cut တခုပါပဲ။
Enter – object တခုကို select ပေးပြီး OK button နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဆင်တူတယ်။
Myanmar End User ရဲ့ ဆောင်းပါးများကို Facebook မှ ဖတ်ပါက MPT အသုံးပြုသူများ အခမဲ့ ဖြစ်ပြီး… အခြားအော်ပရေတာများကတော့ Data ကုန်ကျမှု မရှိသလောက်ပါပဲ… ဒါကြောင့် နည်းပညာဆောင်းပါးများဖတ်ဖို့ အကူအညီများ ရယူဖို့ Myanmar End User ရဲ့ Facebook page ကို Like လုပ်ထားလိုက်ပါ…
Facebook မှ နည်းပညာ သတင်း၊ ဆောင်းပါးတွေ ဖတ်ချင်ရင်တော့ Facebook page >> https://www.facebook.com/MyanmarEndUser
နည်းပညာ အခက်အခဲတွေ ဆွေးနွေးဖို့ဆိုရင် Facebook group >> https://www.facebook.com/groups/myanmarenduser
နည်းပညာ သတင်း၊ ဆောင်းပါးတွေ ဖတ်ချင်ရင်တော့ Website >> http://myanmarenduser.com
စာရေး ဝါသနာပါသူများအတွက် Samsung Galaxy C9 pro ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး
Menu Bar ထည့်သွင်းလာတဲ့ Messenger နောက်ဆုံးဗားရှင်း
ကလေးတွေအတွက် custom PC မိတ်ဆက်လိုက်တဲဲ့ Microsoft နဲ့ Kano
Android Phone နဲ့ ကွန်ပျူတာကြား အကောင်းဆုံး data လွှဲပြောင်းနည်း ၅မျိုး
By Win Thet Oo May 5, 2019 0
Microsoft ရဲ့ Open Design နည်းလမ်းအသစ်။
By Win Thet Oo May 3, 2019 0
Desktop Performance နဲ့လာသော laptop (သို့) Alienware Area-51m
By Win Thet Oo April 6, 2019 0
သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး Graphic Card ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
By Win Thet Oo March 26, 2019 0
Gamer တိုင်း ဖတ်သင့်သော သတင်း (သို့မဟုတ်) Game လောကကြီးကို ပြောင်းလဲပေးမည့် Google Stadia
By Win Thet Oo March 19, 2019 0
Keyman အတွင်း Keyboard လက်ကွက်ထည့်သွင်းနည်း
By Myanmar End User October 5, 2018 0
Easy Zawgyi Font Changer Download
By Myanmar End User June 22, 2018 0
October 12, 2017 114546 views
February 24, 2017 66815 views
November 16, 2016 45148 views